မိခငျဖွဈသူက ကလေး၂ ယောကျကိုကားထဲထားပွီး အရကျသှားသောကျရာက ကလေးမြား သဆေုံးမှု – Myanmar
မိခငျဖွဈသူက ကလေး ၂ယောကျကို ကားထဲ ထားပွီး အရကျသှားသောကျရာက ကလေးမြား သဆေုံး
<img class=”alignnone size-full wp-image-531″ src=”https://dailycinews.com/wp-content/uploads/2020/09/157.jpg” alt=”” width=”900″ height=”473″ />
အသကျ ၂၆ နှဈအရှယျ မိခငျတဈဦးဟာ သူမရဲ. ကလေး ၂ ယောကျကို ကားထဲမှာထားခဲ့ပွီး အရကျသှားသောကျရာက သှားခြိနျကွာလှနျးတာကွောငျ့ ကလေး ၂ ဦးဟာ သတိလဈမမေ့ောပွီးနောကျ သဆေုံးသှားခဲ့ရတာပါ။
ဒီဖွဈရပျဟာ အလုပျလကျမဲ့ မိခငျတဈဦးကွောငျ့ ဖွဈပှားရတာဖွဈပွီး ကလေး ၂ ဦးကတော့ တဈဦးက အသကျ ၆ နှဈနဲ့ နောကျတဈဦးက အသကျ ၃ နှဈပဲ ရှိသေးတာပါ ။ မိခငျဖွဈသူဟာ စကျတငျဘာလ ၂ ရကျနေ့ ည ၂ နာရီလောကျမှာ ကလေး၂ ဦးကို ကားထဲမှာ ထားပွီး ထှကျသှားခဲ့ရာ နောကျတဈရကျ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီ ကြျောမှ ပွနျရောကျလာခဲ့တာပါ ။ သူမထှကျသှားစဉျမှာ ကားမှနျတှကေို အပွညျ့တငျခဲ့ပွီး ကားတံခါးတှကေိုလညျး သော့ခတျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
စကျတငျဘာ ၄ ရကျနေ့ စုံစမျးမှုတှအေရ ကလေးငယျ ၂ ဦးဟာ အပူလှနျကဲမှုကွောငျ့ အခုလိုမြိုး သတိလဈကာ သဆေုံးတဲ့ထိ ဖွဈပှားခဲ့ရတာပါ။ ရဲဌာနရဲ. အဆိုအရ အခငျးဖွဈပှားရာ နရော အနီးတဝိုကျမှာ အဲ့ဒီနကေ့ အပူခြိနျဟာ ၃၇ ဒီဂရီ စဲလျဆီးယပျဈ ထိ ရှိနပွေီး ကားထဲမှာဆို အဲ့ဒီထကျ အပူခြိနျပို ပွငျးနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
<img class=”alignnone size-full wp-image-532″ src=”https://dailycinews.com/wp-content/uploads/2020/09/158.jpg” alt=”” width=”599″ height=”337″ />
အနီးအနားက CCTV မှတျတမျးတှနေဲ့ မိခငျဖွဈသူ သှားသောကျခဲ့တဲ့ အရကျဘားက ဝနျထမျးတှရေဲ. ထှကျဆိုခကျြအရ တာဝနျမဲ့တဲ့ မိခငျဖွဈသူကို ဖမျးဆီးထားပွီး ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
မိခင်ဖြစ်သူက ကလေး ၂ယောက်ကို ကားထဲ ထားပြီး အရက်သွားသောက်ရာက ကလေးများ သေဆုံး
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် မိခင်တစ်ဦးဟာ သူမရဲ. ကလေး ၂ ယောက်ကို ကားထဲမှာထားခဲ့ပြီး အရက်သွားသောက်ရာက သွားချိန်ကြာလွန်းတာကြောင့် ကလေး ၂ ဦးဟာ သတိလစ်မေ့မောပြီးနောက် သေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။
ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ အလုပ်လက်မဲ့ မိခင်တစ်ဦးကြောင့် ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီး ကလေး ၂ ဦးကတော့ တစ်ဦးက အသက် ၆ နှစ်နဲ့ နောက်တစ်ဦးက အသက် ၃ နှစ်ပဲ ရှိသေးတာပါ ။ မိခင်ဖြစ်သူဟာ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ည ၂ နာရီလောက်မှာ ကလေး၂ ဦးကို ကားထဲမှာ ထားပြီး ထွက်သွားခဲ့ရာ နောက်တစ်ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီ ကျော်မှ ပြန်ရောက်လာခဲ့တာပါ ။ သူမထွက်သွားစဉ်မှာ ကားမှန်တွေကို အပြည့်တင်ခဲ့ပြီး ကားတံခါးတွေကိုလည်း သော့ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ စုံစမ်းမှုတွေအရ ကလေးငယ် ၂ ဦးဟာ အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် အခုလိုမျိုး သတိလစ်ကာ သေဆုံးတဲ့ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ရတာပါ။ ရဲဌာနရဲ. အဆိုအရ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ အနီးတ၀ိုက်မှာ အဲ့ဒီနေ့က အပူချိန်ဟာ ၃၇ ဒီဂရီ စဲလ်ဆီးယပ်စ် ထိ ရှိနေပြီး ကားထဲမှာဆို အဲ့ဒီထက် အပူချိန်ပို ပြင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနီးအနားက CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ သွားသောက်ခဲ့တဲ့ အရက်ဘားက ၀န်ထမ်းတွေရဲ. ထွက်ဆိုချက်အရ တာဝန်မဲ့တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
COVID ကွောငျ့ ကွှလှေငျ့ခဲ့ရတဲ့ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးအတှကျ ယူကြုံးမရဖွဈနခေဲ့တဲ့ ဂရဟေမျ